हातखुट्टा झमझम्याइरहेको महशुस हुन्छ, किन होला ? – Rastriyapatrika
बिनासित्ति मेरो हात हातखुट्टा झमझम्याइरहेको महशुस हुन्छ । किन होला ?
को साझा समस्या र जिज्ञासा हो हातखुट्टा झमझम गर्नु । प्रायःले बिनासित्ति हातखुट्टा झमझम्याइरहेको महशुस गर्छन् । खाशमा यसो हुनुको ६० देखि ७० प्रतिशत कारण मानसिक हो । मानसिक रुपमा त्यस्तो महशुस गरेर धेरैले आफूलाई यो समस्या कहिल्यै समाधान नभएको भनेर अस्पतालको चक्कर काट्छन् ।
किन त्यस्तो महशुस हुन्छ त ?
तनाव, थकान र चिन्ताका कारण यस्तो हुन्छ । जसले गर्दा हातखुट्टा तातेको र झमझमाएको महशुस हुन्छ । यसैगरी २० देखि ३० प्रतिशतको हताखुट्टा झमझम गर्नु रोगको कारण पनि हुन सक्छ । डायबिटिज भएको मान्छेलाई यस्तो हुनु सामान्य कारण मानिन्छ । अर्काे वाथरोग हो । यसैगरी भिटामिन बी १२, बी ६ को कमीले पनि यस्तो हुन सक्छ ।
नशाकै कारणले पनि हुन्छ कहिलेकाहिँ । कतिपय अवस्थामा जोर्नीहरु, हातको कुहिनो र कुम, खुट्टाको घुँडामा नशा च्यापिएर पनि झमझमाउन सक्छ ।
स्पाइनल कडमा ट्युमर वा इन्फेक्सन भएपनि यस्तो समस्या हुन्छ । चोटपटकबाट घाइते हुँदा पनि यस्तो हुन्छ । अर्काे कारण सिरिङ्गोमायलिया हो । यो भनेको स्पाइनलमा पानी जम्ने हुन्छ । कतिपय अवस्थामा भने दिमागको पुगेको चोटले पनि यस्तो हुन्छ ।
डाक्टरलाई देखाउने अवस्था
विविध कारणल यस्तो हुने भएकाले ठूलै रोग पो लाग्यो कि भनेर आत्तिने गर्नुहुँदैन । आफूले कति पीर, चिन्ता र तनाव लिइरहेका अवस्था छ त्यतातिर ध्यान दिने र त्यसलाई कम गर्ने पहिलो उपाय हो । प्यारालाइसिसका संकेत देखियो भने चाहिँ डाक्टरलाई देखाउनुपर्छ । यदि निकै कमजोरी महशुस भयो, झमझमाइरहँदा हातले केही समाउन मुश्किल पर्न थाल्यो र हिँड्न मुश्किल भयो भने डाक्टरलाई देखाउनुपर्छ । त्यसैगरी ढाड, गर्धन दुख्यो भने स्पाइनलको समस्या हुन सक्छ । झमmभमाइरहेको अवस्थामा मांशपेशी सुक्दै गए, हत्केला सुक्दै गए भनेपनि समस्या जटिल भएको ठान्नुपर्छ ।
यस्तो भए के गर्ने ?
दुईचार दिन झमझमायो र निको भयो भने केही गर्नुपर्दैन । लगातार लामो समय झमझमायो भने अस्पताल गइहाल्नुपर्छ । सुरुमा ब्लडमा सुगरको मात्रा जाँच्नुपर्छ । त्यसपछि बाथरोग भएको वा नभएको छुट्याउन जाँच गर्नुपर्छ । यसरी प्रक्रियागत रुपमा जाँच गर्दा केही देखिएन भने साइक्याष्ट्रिक र न्युरोलोजिष्ट वा न्युरो सर्जनलाई देखाउनुपर्छ ।
डा. गोपालरमण शर्मा, स्नायु राेग विशेषज्ञ -स्वास्थ्य खबरपत्रिका